UCele ukhala ngokungafundiseki kwabantu ngokuvalwa kwezwe | News24
UCele ukhala ngokungafundiseki kwabantu ngokuvalwa kwezwe
ISITHOMBE: Moeketsi MamaneUNgqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uMnu Bheki Cele ngesikhathi ehambele inxanxathela yezitolo i-Greater Edendale ngoMsombululo.
UNGQONGQOSHE wamaphoyisa kuzwe lonke uMnu Bheki Cele uthi kuningi okusamele kwenziwe ukufundisa abantu basemalokishini aseMgungundlovu mayelana nokulandela imithetho kanye nemigomo yokuvalwa kwezwe okwesikhashana (national lockdown).
UMnu Cele ukuveze lokhu ngoMsombuluko mhla zili-11 kuNhlaba (May) ngesikhathi ekhuluma nabezindaba enxanxatheleni yezitolo i-Greater Edendale Mall.
UCele ubevakashele lenxanxathela yezitolo ukuzohlola ukuthi abantu bayayilandela yini imigomo yokuvalwa kwezwe yokuthi bafaka izimfonyo baphinde bagcine ibanga bengasondelani.
Uphinde wavakashela endaweni yaseDambuza nalapho efike wakhala khona ngokuthi abantu abaningi basahluleka ukulandela imithetho kanye nemigomo.
“Ezitolo ngijabulile ngibonile ukuthi izimenenja ziyaqinisekisa ukuthi abantu balandela imigomo. Kodwa uma uphumela ngaphandle ezindaweni zasemalokishini umhlola. Ngihambile ngaya endaweni yakaDambuza ngafika ngawubona umhlola. Kungazuthi abakaze bezwe ezimpilweni zabo ukuthi kukhona into ekuthiwa izimfonyo, kukhona into yokuthi abangasondelani kanye nokuwasha izandla[ngesibulali magciwane]. Sidinga imfundiso enkulu kulezi zindawo ukuthi bafundiswe bazi ukuthi lezi zinto ziwumthetho. Lezi zinto aziwona umthetho kakhulu kodwa ziwumphumela wokuthi kumele uphile ukuze abaseduze baphile nesizwe siphile ngoba leligciwane liyabulala.
“Esikwaziyo nokuyiqiniso ukuthi asikakaboni lutho l pha eNingizimu Africa imanxa kuza ukufa. Uma ubuka izwe laseMelika kushona abantu abangu-2000 ngosuku olulodwa okusho ukuthi izikhathi ezinzima ziseza. Siyacela ukuthi abantu sibambisane ukuze sizokwazi ukuvika zingafiki kanye kanye lezo zikhathi ezinzima ezizayo,” kubeka yena.
Ebuzwa ngendaba yokuvulwa kwezindawo ezidayisa utshwala, uMnu Cele uthe akanayo impendulo eqondile ukuthi zingahle zivulwe nini.
“Akukho lutho engizokusho ngaloko kodwa ikomidi limatasa lidingida udaba esigabeni sika level 3 siyathemba ukuthi sizodingida sithole ulwazi kongoti. Kodwa angikwazi ukusho ukuthi zizovulwa nini izitolo zotshwala ngoba anginayo impendulo kodwa isikhathi sona siyeza ukuthi zivulwe,” usho kanje.
UMgungundlovu unabantu abangama-64 kuphela abahaqwe igciwane le-coronavirus kanti akukho muntu osashonile. Le ndawo ingeyesithatu esifundazweni ehamba phambili ngesibalo sabantu abanaleli gciwane.
UMnu Cele uveze ukuthi ayi-253 amaphoyisa asetholakale ukuthi nawo asetheleleke ngaleli gciwane kuzwelonke kanti akukho nelilodwa elaseMgungundlovu elisathelelekile. Amaphoyisa angu-184 kulawa athelelekile angawasesifundazweni sase-Western Cape.
Uthe ukudayiswa kogwayi kanye notshwala ngokungekho emthethweni kubanikeza inkinga kodwa wathi lena akusiyona inkinga yamanje inkinga yakudala.
Uthe amaphoyisa asenze umsebenzi oncomekayo emacaleni okudayiswa kotshwala ngokungekho emthethweni.
“Ngaphansi kwesigaba sika-level 5 besinamacala ali-10 kuphela amayelana notshwala kodwa manje esigabeni sika-4 isibalo sinyukile. Sesibophe abantu abangama-50 ngokudayisa utshwala saphinda sabopha abangama-20 ngokusabalalisa utshwala okusho ukuthi izibalo ziyanda.
“Siyathemba ukuthi uma ngabe sekuvulwa ukudayiswa kotshwala kuzonciphisa ukudayiswa kotshwala ngokungekho emthethweni.
“Ngisho utshwala obenziwe emakhaya isibalo sabo siyenyuka kanti futhi kunabantu esesibabophile ngaloko.
Kodwa into esingeke siyenze njengohulumeni ukuthi ngoba naku abantu benza ubugebengu bokudayisa ngokungekho emthethweni utshwala kanye nogwayi manje sekumele sikuvule loko ngaleso sizathu. Ngeke siphushwe ubugebengu ukushintsha imigomo yethu. Isikhathi sizofika okwamanje sisajabulela ukwehla kwezibalo zobugebengu ngenxa yokungatholakali kotshwala.”